नेपाली फुटबल टिमलाई 'प्रेसिङ गेम'... :: सीताराम कोइराला :: Setopati
नेपाली फुटबल टिमलाई 'प्रेसिङ गेम' खेलाउँछु : प्रशिक्षक कालिन
सीताराम कोइराला काठमाडौं, असार २६
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रमुख प्रशिक्षकमा योहान कालिन नियुक्त भएको चार महिना पूरा भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले स्विडेनका नागरिक कालिनलाई गत मार्चदेखि दुई वर्षका निम्ति प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको हो।
४२ वर्षीय कालिनले युरोपियन फुटबल महासंघ (युइएफए) ‘ए’ डिप्लोमा कोर्स गरेका छन्। उनले स्विडेनको 'अमेच्योर लिग' र क्षेत्रीय स्तरका उमेर समूहका टिमका प्रशिक्षक भएर काम गरिसकेका छन्।
कालिनले नेपालमा प्रशिक्षकका रुपमा काम गरेको दोस्रो पटक हो। यसअघि उनी २०७० सालमा नेपालको ‘ए’ डिभिजन क्लब मच्छिन्द्रको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका थिए। उनले सुपर लिगका सबै खेलमा जित हात पारेका थिए। त्यो सिजन मच्छिन्द्र राष्ट्रिय लिगमा दोस्रो भएको थियो।
राष्ट्रिय टिममा चार महिनामा चार मैत्रीपूर्ण खेल खेलाएका कालिनको नेतृत्वमा नेपालले जित निकाल्न सकेको छैन। नेपालले कुवेतविरुद्ध २ मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। पहिलो खेलमा गोलरहित बराबरी र दोस्रोमा १-० को हार बेहोरेको थियो। यस्तै मलेसियासँग ४-० ले हारेको नेपालले ताइवानलाई १-१ को बराबरीमा रोकेको थियो।
अब नेपालले आगामी सेप्टेम्बरदेखि सुरू हुने फिफा विश्वकप २०२२ र एएफसी कप २०२३ को छनौट प्रतियोगिता खेल्दैछ। यो नै कालिनको पहिलो औपचारिक प्रतियोगिता हुनेछ। छनौटमा नेपालसहित एसियाका ४० देशले भाग लिँदैछन्। नेपालले दुई वर्षको अवधिमा 'होम एन्ड अवे' गरी आठ खेल खेल्नेछ।
विश्वकप र एसिया कप छनौटको तयारी तथा समग्र नेपाली फुटबलको विषयमा सेतोपाटीका सीताराम कोइरालाले कालिनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईं प्रशिक्षक नियुक्त भएको चार महिना भयो। नेपाली फुटबलको अवस्था कस्तो पाउनुभयो?
केही चुनौती छन्। केही वर्षअघिसम्म नेपाली फुटबलका लागि कठिन समय थियो। गत सिजनदेखि लिग सुरू भएको छ, जसले फुटबल राम्रो दिशामा जाँदैछ भन्ने लागेको छ। तर राम्रो हुन थप समय लाग्छ।
तपाईंको नेतृत्वमा नेपालले चार वटा खेल खेलिसक्यो। दुईमा बराबरी र दुईमा हार भयो। नेपालले एक गोल मात्र गर्न सकेको छ। किन गोल गर्न चुक्छ?
पछिल्ला चार खेलमा नेपालले गरेको प्रदर्शनबाट खुसी छु। मलेसियाविरुद्ध भने स्तरअनुसार खेल्न सकेनौं। हामीले चार वटै खेल बलिया टिमसँग खेलेका थियौं, एक गोल मात्र गर्न सक्यौं। हामीले खाएका गोलमध्ये तीन गोल ‘सेट पिसेस’ बाट थियो। दुई पेनाल्टी र एक फ्रिकिक गोल खायौं।
मलेसियाविरुद्धको खेलको पहिलो दस मिनेट निकै कठिन भयो। त्यो दस मिनेट मेरो करिअरकै खराब समय थियो, सायद। तर हामीले ताइवानविरुद्ध निकै राम्रो खेल्यौं। बलियो कुवेतविरुद्ध पनि दुई खेलमा एक पेनाल्टी गोल मात्र खायौं। हाम्रो प्रदर्शनमा सन्तुष्ट छु।
बलिया टिमविरुद्ध राम्रो खेल्न सक्नु मेरा लागि राम्रो सुरूआत हो। नेपाली खेलाडीमा खेलप्रतिको लगाव बलियो छ। खेल्ने तरिका पनि राम्रो हुँदै गएको छ। विपक्षीविरुद्ध हामीले बलियो आक्रमण गर्न नसकेको सत्य हो। हामीबाट धेरै आशा गरिएको छ। तर आशाअनुरुप पर्याप्त अभ्यास गर्न पाएका छैनौं। उत्कृष्ट नजिताका लागि समय लाग्छ। हामीले टिमलाई निरन्तर राम्रो बनाइरहनु पर्छ।
एसिया र दक्षिण एसियामा नेपाल फुटबल स्तर कस्तो छ?
एसियाका बलिया टिमहरू जापान, इरान, कोरियासँग तुलना गर्नुहुन्छ भने हामी धेरै पछाडि छौं। दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा भारत पनि निकै अघि गइसकेको छ। भारतले पछिल्लो पाँच वर्षमा राम्रो गरिरहेको छ। हामीले भारतबाट सिक्न सक्छौं।
पछिल्लो पाँच वर्षमा अरु उक्लिँदै गए, नेपाली फुटबल पछि पर्‍यो। लिग लगायत अन्य काम हुन सकेनन्। हामी एसियाका बलियो टिमको स्तरमा तत्काल पुग्न त सक्दैनौं। तर हामीले अहिलेलाई दक्षिण एसियाका टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ। साफको उपाधिका लागि चुनौती दिन सक्नुपर्छ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालले साफ च्याम्पियनसिप जित्न सक्छ?
दक्षिण एसियामा भारत बलियो टिम भएकोमा शंका छैन। उनीहरूका पछिल्ला नतिजाले त्यसै भन्छ। भौतिक पूर्वाधारदेखि प्रतियोगिताबाट टिम बलियो बनाउन भारतले धेरै लगानी गरिरहेको छ।
माल्दिभ्सले पछिल्लो साफ च्याम्पियनसिप सेमिफाइनलमा हामीलाई हराएको थियो। त्यसैले माल्दिभ्स हामीभन्दा अघि देखिन्छ। तर हामीले माल्दिभ्सलाई पराजित गर्न सक्नुपर्छ। भारतलाई पनि पराजित गर्ने योजना बनाउनुपर्छ।
नेपालले दक्षिण एसियाका टिमसँग प्रतिस्पर्धात्मक खेल्छ। तर अन्तिम समयमा सधैं चुक्छ। के मिल्न सकिरहेको छैन?
नेपाली फुटबलको कमजोर पक्ष भनेको टिम संरचना हो। त्यो सुधार्न हामी परिश्रम गरिरहेका छौं। मेरो विचारमा नेपाल टेक्निकल रुपमा राम्रो भएपछि ट्याक्टिकल पक्षमा रुपमा पनि कमजोर छ। यो पनि सुधार्न कोशिश गरिरहेका छन्।
यद्यपी नेपाली खेलाडी प्रतिभावान छन्। उनीहरूमा सिक्ने भोक छ। अभ्यास र मैदानमा पनि उनीहरूको लगाव र परिश्रम देखिन्छ। नेपाली टिम बलियो बनाउन बढीभन्दा बढी अभ्यास गर्नुपर्छ। खेलाडीले मैदानमा जति धेरै समय बितायो, टिम उति नै बलियो हुँदै जान्छ।
युरोपेलीहरूसँग तुलना गर्ने हो भने नेपाली खेलाडी कम अभ्यास गर्छन्। अभ्यासको ममिलामा बलिया टिम र नेपाली टिमबीच ठूलो खाडल छ। अभ्यास सत्रमा बढी समय बिताउने हो भने कमजोरीहरू सुधार्न सकिन्छ भने प्रशिक्षकले पनि आफ्ना रणनीति लागू गर्ने र सुधार्ने मौका पाउँछ।
नेपालले निकट भविष्यमा फिफा विश्वकप र एसिया कप छनौट खेल्दैछ। यसका लागि तयारी कसरी गर्छ?
प्रशिक्षण सुरू गरिसकेका छौं। टिमको 'सेप' राम्रो बनाउने कोशिश गरिरहेका छौं। आक्रामक फुटबल खेल्ने र उत्कृष्ट प्रदर्शन दिने हाम्रो लक्ष्य हो। मेरो योजना 'प्रेसिङ गेम' खेलाउने छ। (प्रेसिङ गेम भन्नाले विपक्षीले बल पाउने बित्तिकै छेउमा भएका खेलाडीले एकै पटक घेरेर बल फिर्ता लिन खोज्ने रणनीति हो।)
तर अभ्यासका लागि मैदानको समस्या छ। मैदान र मौसमका कारण चाहे जति अभ्यास गर्न पाएका छैनौं। तै पनि भएकैमा प्रयास गरेका छौं।
विश्वकप र एसिया कप छनौटमा नेपाल आफूभन्दा ठूला टिमसँग खेल्दैछ। त्यसअघि बलिया टिमसँग मैत्रीपूर्ण खेलेर तयारी गर्नुपर्छ कि?
हामी बलिया टिमसँग मैत्रीपूर्ण खेल्न कोशिश गरिरहेका छौं। चार महिनामा चार वटा खेलिसकेका छौं। जसमा मलेसिया हामीभन्दा वरियता तल थियो। कुवेत र ताइवान हामीभन्दा बलिया टिम हुन्। तत्काल, जापानजस्ता बलिया टिमसँग खेलेर हामीलाई फाइदा छैन। मध्यम टिमसँग मैत्रीपूर्ण खेलेर तयारी गर्ने योजना छ।
विश्वकप र एसिया कप छनौटका लागि राम्रो तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले बलिया टिमसँग खेल्नुपर्नेछ, उनीहरूको समाना गर्नसक्ने हुनुपर्छ।
विश्वकप छनौटमा बलिया टिमसँग खेल्नु पर्दा कत्तिको दबाब छ?
हामी सबै खेल जित्न चाहन्छौं। यसका लागि राम्रा खेलाडी छान्छौं। विश्वकप छनौटमा हामीलाई कठिन हुनेमा सचेत छौं। अहिलेलाई नतिजा ठूलो होइन जस्तो लाग्छ। अहिले राम्रो टिम बनाउनु नै महत्वपूर्ण कुरा हो, बलिया टिमलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ।
प्रशिक्षकलाई सधैं दबाब हुन्छ। जित र चाँडो चाँडो नतिजा हात पार्ने चाहना हुन्छ। कहिलेकाँही नराम्रो खेल्दा दबाब झनै बढ्छ। राष्ट्रिय टिममा काम गर्नुहुन्छ भने छुट्टै अनुभव हुन्छ। मिडिया, समर्थक सबै तपाईं समक्ष हुन्छन्। नेपालमा फुटबलका धेरै फ्यान छन्। यसैले गर्दा म नेपाल फर्किन चाहेको थिएँ।
टिममा फिटनेसलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। पछिल्ला खेलमा पनि फिटनेसकै आधारमा टिम छनौट गरेको भन्नु भएको थियो। नेपाली खेलाडीको फिटनेस कस्तो पाउनु भएको छ?
फुटबल दौडिएर खेल्ने खेल हो। तर दौडिँदा दिमाग पनि लगाउनु सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय टिमका हुन् वा व्यावसायिक फुटबल खेलाडी, फिटनेसमा ध्यान दिनुपर्छ। कोही खेलाडी घाइते भए उसले राम्रो अभ्यास गर्न सक्दैन। अनि हामी टिममा छनौट गर्दनौं। मेरा लागि यो सामान्य कुरा हो।
फिटनेटसँगै खेलाडीले अभ्यासमा प्रदर्शन पनि गर्न सक्नुपर्छ। खेलाडी फिट छैन भने शतप्रतिशत खेल्न सक्दैन। फुटबल विपक्षीसँग जुधेर खेल्नुपर्ने भएकाले पनि फिटनेसमा ध्यान दिन जरुरी छ।
नेपाली टिमका खेलाडी र फिटनेस ट्रेनरबीच झगडा भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यो विषयमा तपाईंको धारणा के छ?
विवाद भएको सत्य हो। के-कसो हो भन्ने बुझ्ने काम गरिरहेका छौं। एन्फाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसमा अरू भन्नु छैन।
यस्ता विवादले टिममा कस्तो असर गर्छ?
समग्रमा भन्नु पर्दा अहिले टिम सकारात्मक दिशामा बढिरहेको छ। खेलाडी र हामीबीच राम्रो सम्बन्ध छ। धेरै नजिक भएर काम गर्दा टिममा विवादहरू हुन्छन्। तर यसले टिमको एकतामा असर गर्दैन।
मैदान बाहिरको वातावरणले पनि नतिजामा असर गर्छ भनिन्छ। मैदान बाहिरको वातावरण मिलाउन एन्फासँग कसरी सहकार्य गरिरहनु भएको छ?
हामी छलफलमा छौं। म नेपाल आउनुअघि नै के-कसरी काम गर्ने भन्नेबारे कुरा भएको थियो। एन्फालाई मेरो प्रशिक्षण तरिका थाहा छ। प्रशिक्षणमा म स्वतन्त्र छु। एन्फाबाट सहयोग पाइरहेको छु, मेरो तरिकाले काम गर्न सक्छु जस्तो लागेको छ।
तर हामीसँग पूर्वाधार कम छ। यी पूर्वाधार आजभोलि नै विकास गर्न सकिने पनि होइन, दीर्घकालीन काम हो। यसको पहल चाँडै थालियो भने सहज हुन्छ।
एन्फासँग तपाईंले के प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ?
सम्झौता हुँदा कडा परिश्रम र सक्दो राम्रो गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुँ। एन्फाले पनि मलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्ध जनाएको छ। कडा परिश्रम गरेर नेपाली फुटबल विकास गर्न सहमत भएपछि हाम्रो सहयात्रा सुरू भएको हो। हामी नेपाली फुटबलबारे चिन्तित छौं। विकासका लागि धेरै काम गरिरहेका छौं। खेलाडी र क्लबसँग पनि मिलेर काम गरिरहेका छौं।
एन्फाले हाम्रो काम नजिकबाट नियाल्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। हामीले गर्न खोजेका नयाँ कामबारे पनि ऊ जानकार छ। रातरात परिवर्तन हुँदैन भन्ने हामी सबैलाई थाहै छ।
पाँच वर्षअघि नेपालको लिगमा क्लबको प्रशिक्षक हुनु भएको थियो। फेरि फर्कने संयोग कसरी जुर्‍यो?
पहिले क्लब फुटबलमा काम गर्न मज्जा भएको थियो। त्यतिबेलै एन्फासँग सम्पर्क भएको थियो। नेपाली खेलाडीबारे मलाई जानकारी थियो, केही सुधार गर्न चाहन्थेँ। त्यसैले एन्फासँग जोडिएको हुँ। अब मलाई त्यो चुनौती आएको छ।
फोटो /भिडियो : निशा भण्डारी
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २६, २०७६, १५:५८:००
आलमलाई मुद्दा चलाउने रौतहटका प्रमुख सरकारी वकिलको सरूवा
विश्वकप छनोट : कुवेतविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाल
स्पेनसँग रोमानिया ५-० ले स्तब्ध
अर्मेनिया इटालीसँग ९-१ को फराकिलो अन्तरले पराजित
मेसीको गोलमा हारबाट जोगियो अर्जेन्टिना, उरूग्वेसँग २-२ को बराबरी
पोर्चुगल युरोकपमा छनौट, रोनाल्डोले गरे ९९ औं गोल
राष्ट्रिय टिमबाट बर्खास्त चार फुटबलरमाथि थप अनुसन्धान हुने